Blog | Easy Travel Dawei | Sam the Man tours | Page 2
Posted on September 19, 2019 By SAM THE MAN in Uncategorized
ကြေး အိုးခေတ်ကပင် မြေအိုးလုပ်ငန်းလည်း ပေါ်ခဲ့မည်ဖြစ်သည်
။ မြေအိုးတွင် ပန်းပုံစံအမျိုးမျိုးဖော်
ပြီး အသုံးပြုခဲ့သည်မှာ ပျူခေတ်ကပင် စတင်ခဲ့သည်။ ခေတ်အလိုက် မြေအိုးလုပ်ငန်းကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ
ဒေသအလိုက် ထင်ရှားသော အိုးအမည်များပေါ်ထွန်းခဲ့သည်
။ ပဲခူးဒေသတွင် ပုဇွန်မြောင်းအိုး၊ တာဝဘူး
မိတ္တီလာဒေသတွင် သဲတောကိုး စသဖြင့် ထူးခြားသောအိုးများ ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်
ထားဝယ်ဒေသ အိုးလုပ်ငန်းသည် ရှေးအစဉ်အဆက်ဆင်းသက် လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြသည်
လက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိသားစုလုပ်ငန်းလည်းဖြစ်သည်။ ထိုရပ်ကွက်ကို အိုးလုပ်ပြင်ရပ်ကွက်ဟု
အိုးအမျိုးမျိုး စဉ့်အိုး၊ ရေအိုး၊ ထမင်းအိုး၊ ပေါင်းအိုး
၊ ညောင်ရေအိုး၊ ရေချမ်းအိုး
၊ လဘက်ရည်အိုး၊ ငရုပ်ဆုံ
သပိတ်များနှင့် ကလေးကစားစရာ အရုပ်အမျိုးမျိုး၊ ပိုက်ဆံစုဘူးစသည်များကို လုပ်ကိုင်ရောင်းချကြသည်
ရေအိုးကို ရိုးရိုးမဟုတ်ပဲ ရွှေဖရုံသီးပုံများထွင်၍လည်းကောင်း၊ ပန်းပုံပေါ် ဆေးရေး၍လည်းကောင်း
အိုးလုပ်သည့် မြေသည် ရွှံ့စေးမြေ
။ ရွံ့စေးမြေရနိုင်သည့် ဥဿရံရပ်မှ သယ်ယူ၍
။ မြစ်သဲများကို ဇကာချပြီး လိုအပ်သော အချိုးအဆဖြင့် ရောစပ်ယူရသည်
အိုးလုပ်နည်း သိမ်းထားသော ရွှံ့စေးမြေများကို လိုသလောက်ယူပြီး ညက်ညောပျော့ပြောင်းမှု ရှိစေရန်
နင်းနယ်ထုထောင်းရသည်။ မိမိလိုအပ်သည့် အရွယ်အစား အိုးနှုတ်ခမ်းသားကို စတင်ဖော်ထုတ်ရသည်
အိုးအဝနှုတ်ခမ်းသား တစ်ပတ်လည်ညီသောအခါ ပျဉ်ပြားပေါ်တွင်တင်၍ အခြောက်ခံရသည်
တောင့်တင်းခိုင်မာလာသောအခါ အဝနှုတ်ခမ်းသားကို မှောက်ထား၍ အတွင်းဘက်မှ ကျောက်ချော
ကလေးတစ်လုံးဖြင့် အမာခံယူပြီး အပြင်ဘက်မှ ပျဉ်ပြားငယ်လက်ခတ်ဖြင့် နာနာရိုက်ခတ် ပေးလျက် လိုအပ်
ရေတကောင်းအိုး၊ ညောင်ရေအိုး၊ ရေနွေးခရားအိုးကဲ့ သို့သော အဝကျဉ်းသည့်အိုးများကို ပထမ
တစ်ဝက်မျှ ပုံဖော်ပြီးလျှင် နေရိပ်တွင် တစ်ရက်မျှ အခြောက်ခံထားရသည်
။ နောက်ရက်မှ တစ်ခါ အပြီးသတ်
ဆက်လုပ်ရသည်။ ၂ ဆင့် လုပ်ရခြင်းကြောင့် ဆက်ကြောင်းမှ ကွဲအက်မှုမရှိစေရန် သတိပြုရသည်
အိုးအလှဖော်ရန် သောက်ရေအိုး ပုံဆန်းထွင်ထားသော အိုးများကို အိုးသားချောမွေ့စေရန် တစ်ဝက်မျှ အခြောက် ၊
ခံပြီးလျှင် ဂုံညှင်းဖြင့် ချောမွတ်လာအောင် ပွတ်တိုက်ပေးခြင်း၊ မြေနီမှုန့်
၊ မြေဝါမှုန့်များဖြင့် သုတ်လိမ်းခြင်း၊
မီးဖုတ်ပြီးလျှင် ဆေးဖြင့် ပန်းအလှပုံရေးဆွဲခြင်းများကို ပြုလုပ်ရသည်
အခြောက်လှမ်းထားပြီးသော အိုးများထဲမှ အမြင့် ၄ တောင်ခန့် အိုးကြီးတစ်တန်း၊ အိုးငယ်
တစ်တန်းအားဖြင့် အတန်းလိုက် အတန်းလိုက် စီတန်းလျှက် အိုးကြီးများ ပတ်လညg အဖေ
မှ ရေပုံ နေသော ကောက်ရိုးများ ဖုံးအုပ်ပေးရသည်
။ ထို့နောက် ထိုရေ
? ထူထူသုတ်လိမ်း၍ အပြင်ဘက်မှ သစ်ရွက်ခြောက် ကောက်ရိုးခြောက်
။ အိုးများကျက်သည်အထိ ချင့်ချိန်၍ မီးထိုးပေးပြီးလျှင် နောက်တစ်ရက
မြေသပိတ်ကို အိုးများဖြင့် ရောနှောမဖုတ်ရပါ။ သီးခြားခွဲ၍ ဖတ်ရသည်
။ ထိုသပိတ်များကို ဖုတ်ရာတွင်
အနက်ရောင်ရရှိစေရန် သပိတ်များ ကျက်လောက်သောအချိန်တွင် စပါးခွံဖွဲကြမ်းများကို လောင်းထည့်ပေးရ
ဒေါင်ဒေါင်မြည်မှ အိုးစု ထားဝယ်စကားပုံတစ်ခုရှိပါသည်
။ ဆိုလိုသည်မှာ အိုးဝယ်သူသည်
မိမိဝယ်ယူမည့် အိုးကို ခေါက်၍ စမ်းသပ်ပြီးမှ ဝယ်ယူလေ့ရှိသည်
။ အက်သံပါသလား ဒေါင်ဒေါင်မြည် ရဲ့လားဟု
။ ဒေါင်ဒေါင်မြည်မှ အိုးဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်
စဉ် အိုးသည် ကြီးလတ် အငယ်
၊ အရွယ်အစားစား ပြုလုပ်ကြသည်
ရော်ဘာစေးခံသည့် ခွက်များကိုလည်း စဉ်ရေသုတ်၍ သုံးကြသည်
စဉ့်အိုးသည် ပထမပိုင်းမျှပြုလုပ်ပြီး နေရိပ်တွင် တစ်ရက်အခြောက်ခံထားရသည်
စဉ်ရေသည် ချော်ခဲများကို အမှုန့်ထောင်းထုကြိတ်ပြီးလျှင် ထမင်းရည်နှင့် အနေတော် ရောစပ်၍
အုတ်ပုံစံအရွယ်အုတ်ချပ် အစိမ်းများကို အပေါ်နှင့်ဘေးပတ်လည်ကာရံလျက် အောက်မှ မီးထိုး၊
ပေါက်ကို တစ်တောင်ခန့် အမြင့်လုပ်၍ အလယ်တွင် အိုးများကို (စဉ်ရေသုတ်ထားသော စဉ်တိုး စိမ်းများ) ၊
။ အုတ်ဖုတ်သကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ မီးထိုးလျှင် အစပိုင်းနည်းနည်းနှင့် ဖြေးဖြေးချင်း မီးထိုးရသည်
မီးခိုးအရောင်ကြည့်၍ ချိန်ဆပြီးလျှင် မီးထိုးပေါက်ကို ပိတ်လိုက်ရသည်။ မီးထိုးသည့် ထင်းသည် ထင်းစိုနှင့်
ဖိုစဖွင့်ရာ၌ အပူရှိန်လျော့နည်းလာပြီး ၃ ရက်ခန့်အကြာမှ တစ်စတစ်စ ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ရသည်
လေစိမ်းဝင်ပြီး အိုးကွဲတတ်သည်ကို သတိပြုရသည်
Posted on August 1, 2019 By SAM THE MAN in Uncategorized
Posted on May 23, 2019 By SAM THE MAN in Uncategorized
Posted on February 12, 2019 By SAM THE MAN in Uncategorized
Shwe Taung Sar Pagoda isahistoric edifice situated in Tavoy, Tanintharyi Region. Accord
ing to the legend The koel sings and Dawei comes into existence”, Dawei. Administrator UNé
Hla establish the city on Saturday the 13th Waxing of Tabaung in Kawza Sakarit 1116, naming
it Thayawaddy. Only after Saturday. 2nd Waning of Tawthalin in 118 to did it come to be known
King Naruto, enshrining Buddha’s relics brought by Arahantas builtasmall pagoda on
the bank of Dawei on Friday, the 10th Waxing of Hnaung Tagu, in Sakarit 67. In Sakarit 128,
King Naruti’s grandson King Sanda Thuriya renovated the dilapidated small pagoda. Itwas again
renovated by King Narainda in Sakarit 878.
Min Shin Zaw rebuilt the town Dawei in Sakarit 1122, had the pagoda rebuilt toaheight
of 100 cubits. Min Shin Zaw was originallyaShwetaung Villager who later became Shwetaung
Administrator and so offered the pagoda the name Shwe Taung Pagoda. There were several other
names given to it in conjunction with its being associated with Shwe Taung etc, but there were
those who believed that instead of buildingapagoda in Shwetaung, King Min Shin Zaw renovated
the old dilapidated pagoda which eventually came to be known as Shwe Taung Sar Pagoda.
Posted on February 3, 2019 By SAM THE MAN in Uncategorized
Palm wine(Toddy) production in Dawei region by small holders and individual farmers may promote conservation as palm trees becomeasource of regular household income that may economically be worth more than the value of timber sold.
Posted on January 28, 2019 By SAM THE MAN in Uncategorized
Have you ever wondered why cashew nuts are so expensive? Isalot of work before they are in the box and it is ready to eat.
– Drying in the sun about 3-4 days
– Cook about 30 minutes in boil water
-Remove the kernel from nuts
– Drying in the oven about 48 hours with cool fire
– Peer the skin cover from kernel
– Sort by size
##If you want to learn more about it’s process, do invite you to visit to Dawei.
Posted on January 26, 2019 By SAM THE MAN in Uncategorized
We visited Dawei with Sam as our guide justafew days ago. He was super professional, considerate, attentive and caring to our group of 12 high schoolers.
He showed us around pagodas, beautiful beaches and Dawei city center. The restaurants he recommended offered tasty local food. Sam was alsoalocal historian, introducing detailed history and culture to our students who had learnedalot and enjoyed the experience. Highly recommend Sam if you travel to Dawei!
Posted on January 21, 2019 By SAM THE MAN in Uncategorized
These people live Mungmagan beach, they are true locals to the area. Each batch of fish that is caught is done by using traditional fishing boats.
This is boat is called, Boke Ma and is hand crafted and painted with either flags or lights for identification. Previously these boats were controlled and steered by hand, but now, most often they run on machines. They are catching on the side of the seashore, small fish, crab, prawn, and squid, season depending. The boaters leave in the early evening around 4pm, and arrive back home around 1am in the morning, arriving before the market is open to sells the goods caught.
If you want to know more about the day to day culture, the things that most other companies dont talk about, please come see me. My tours areamixture of education and experiential learning tools, to give you both what you want and to dive deeper into why Dawei is as captivating as it is now,